त्यहाँ एक किसिमको महिला हो, जसलाई हेर्दै, यो देखिन्छ कि तिनीहरू भावुक हुन्छन्। त्यसोभए, धेरै पुरुषहरूले यो जोखिम नपाउने र यसलाई यस्तो परिचित गर्न चाहँदैनन् भन्दा उत्तम मानिन्छ। सबै पछि, विपरीत सेक्सको यस्ता व्यक्तिहरूको लागि अदालतमा, तिनीहरूले कुनै पनि अव्यवहारिक संभावनाहरू देख्दैनन्। हो, र तिनीहरूले व्यक्तित्वलाई विचार गर्छन, बढी एक नीला भण्डारण जस्तै, तर निश्चित रूपमा नम्रताको वस्तुको रूपमा होइन।
चिनो लगाउन को लागी कि महिलाहरु लाई यस्तो स्थिर अभिव्यक्ति भनिन्छ, वाक्यांश को मूल को इतिहास के "नीलो मोजा" र के गर्नु पर्छ कि यस्तो शीर्षक को सम्मानित गर्न को लागी।
वाक्यांश विज्ञान "नीलो मोजा" हो। घटनाको इतिहास
यो सामान्यतया मानिन्छ कि "नीलो भण्डारण" ले लेखकलाई मन्टगगको सैलूनमा ब्रिटेनमा 1760 मा जन्मियो। एक संस्करणले यो समुदायको सबैभन्दा सक्रिय व्यक्ति एक अनुवादक, एक बट्यानिस्ट - वैज्ञानिक, लेखक Stillingfleet थियो भनेर भन्छन्। कालो रेशम मोजाको सट्टा, जसको पहिए शिष्टाचारको लागी निहित थियो, उनले नीलो ऊनी मोजे लगाए। यदि उनले सैलून सत्रको सम्झना गरेमा मण्डलीले भने कि "नीला भण्डारण" बिना सुरू गर्न सक्दैनन्। त्यो हो, पहिलो "मानिस" यस शीर्षक संग सम्मानित गरिएको थियो। पछि तिनीहरू कमजोर लिंगको प्रतिनिधिलाई बोलाउन थालिन्, जुन केवल विज्ञान र साहित्यमा रुचि राखेका थिए, जसले उनीहरूलाई हेरचाह वा परिवार बनाउनको लागि आवश्यक पर्दैन। चाँडो, समाजलाई "ब्लू मोजा सोसायटी" भनिन्छ।
रूसमा यो अभिव्यक्ति फ्रान्सबाट आएको थियो।
त्यसो भए, पेरिसमा, 17 औं शताब्दीमा सैलूनहरू थिए, जसको मुख्य भूमिका महिलाहरूले खेलेको थियो। तिनीहरूले शब्द "महिला सिके" शब्द सिर्जना गरे। उनको लोहेको कविताहरूमध्ये ब्रिटिश "ब्लू मोजिङ सोसाइटी" मा अन्ना मूरले दावी गरे कि फ्रान्सेली नाम "ब्लू-फाउन्डेसन" बाट अंग्रेजी शब्दबाट गलत र पनि शाब्दिक अनुवादबाट उत्पन्न भएको थियो।
चीखोको कामहरूमा एक व्यक्तिले "निलो मोजा" भनिने व्यक्तिहरूको यस्तो विशेषतालाई भेट्न सक्छ: "
"यो राम्रो नीलो भण्डारण हुन राम्रो छ।" नीलो भण्डारण ... धिक्कार! एक महिला होइन र एक मानिस होइन, र बीचको मध्य, न त यो र न त यो। "
महिला - "नीलो मोजा"
यो कस्तो किसिमका महिलाहरूले यो कल गर्ने निर्णय गर्न अति उत्तम हुनेछैनन्।
त्यसोभए, बाहिरका व्यक्तिहरू उपस्थिति र नम्रतामा आफूलाई मन पराउँछन्: गहना, प्रसाधन सामग्री, लुगा लगाउने कपालहरू, कपडाको क्लासिक शैली, जुन बाह्य छविमा अनावश्यक केही छैन। उनीहरूको प्रकृतिले, यस्ता महिलाहरू असाध्यै घृणित हुन्छन्, उनी प्रायजसो उदास मन, उदास, चिन्तित हुन सक्छन्। यदि "नीलो भण्डारण" र छेउमा, महिला चालहरू, कोकेट्रीको बारेमा केही कुरा सुन्नुभयो भने मेरो जीवनमा कुनै पनि कारणले यसलाई लागू गर्न अस्वीकार गर्दछ।
यस्ता महिलाहरू आफूलाई प्रेम गर्ने सबै चीजहरू तयार गर्न तयार छन्, कडा परिश्रम, के "नीलो भण्डारण" को अर्थ हो, यसले सकारात्मक गुणहरू प्रशंसा गर्न सक्छ।
असीमित रूपमा पर्याप्त छ, तर त्यस्तो असामान्य, अनौठो महिलाले मानिसलाई माया गर्न सक्दछ। सामान्यतया "नीलो भण्डारण" बलियो आध्यात्मिक, शान्त, मानवअधिकारको एक अर्का मानवताको लागि आकर्षक छ। उहाँ, सबै भन्दा पहिले, भित्री संसार, गहिरो क्षमताको यस्ता गम्भीर क्षमताहरूको कदर गर्दछ र यस्तो जटिल चरित्र संग महिलाको हृदयको कुञ्जी पाउँछ।
महिला - "निलो भण्डारण" लाई धेरै भन्दा बढी खर्च गर्न मन पर्छ उनको समय संग्रहालयहरू, पुस्तकालयहरूमा। यदि तिनी आफ्नै व्यवसायको विकास गर्न व्यस्त छन् भने, उनी अक्सर काममा ढिलो भएर हिंड्छन्। अधीनस्थहरूले मात्र यस व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा अनुमान गर्न सक्छन्, र केहिले पनि उनको अनुपस्थिति अनुमान गरे।
नीलो भण्डारण कसरी गर्ने?
यदि तपाईं बुझ्नुहुन्छ कि तपाई स्त्रीत्व, आत्म-विश्वासको कमी हुनुहुन्न, त्यसपछि "निलो मोजा" नगर्ने तरिका मध्ये एक को दोहराव हो, आत्मविश्वासको लागि पुष्टिकरण। वा तपाईं दुवै आफ्नो सञ्चारकलापहरू विकास विपरीत सेक्सको साथ र सामान्यतया मानिसहरूसँग विकास गर्न चाहनुहुन्छ। स्त्रीलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्, आफ्नो इशाराहरू, व्यवहार, चरा हेर्नुहोस्।
त्यसोभए, हरेक महिलाले चाहे वैज्ञानिक ज्ञानलाई वा आफ्नै लागि नि: शुल्क समय खरिदको खर्च खर्च गर्न मनपर्छ कि चाहेन भने, उनीहरुले आफूलाई सधै महिला मापन गर्नु पर्छ। सबै पछि, यो कुनै पनि महिला को व्यक्तिगत आधार हो।
यदि आपसी समझौता भएन भने पतिसँग कसरी बाँच्न सकिन्छ?
मानिसहरू के डराउँछन्?
हामी किन प्रेममा पर्दछौं?
पुरानो भावना कसरी फर्काउनु हुन्छ?
तपाईंको सपनाहरु को मान्छे कसरि मिलन - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
मलाई मेरो पतिले घृणा गर्दछ, के गर्न - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
कसरी पतिलाई आफ्नी श्रीमतीलाई हराउन डर लाग्छ?
कसरी मानिसको हृदय जित्नुहुन्छ?
तपाईंको जीवनमा मानिसको प्रेमलाई कसरी आकर्षित गर्न?
जाडोको लागि मसालेदार गोभी
फैशनेबल रिंग 2013
के डेनिम भित्री लुगा लगाउने?
कसरी मानिसलाई ईर्ष्या गर्न ल्याउनुहुन्छ?
एक बर्तन मा चिकन
स्नातक 2016 को लागि लामो लुगा
खेल swimwear - के छनौट गर्दा हेर्नु हुन्छ?
कच्चे कद्दीको लागि के उपयोगी छ?
बैगलरको रंगमा: कानमा नयाँ "स्टार वार्स" को प्रीमियरमा इमिला क्लर्क
शब्दको कारण मासिक रूपमा
शाम को फैशन 2014
म एक मनिटरको रिजोल्युशन कसरी थाहा छ?
बाली स्टेसिस - लोक उपचारको साथ लक्षण र उपचार
अनुहारमा Moles - मूल्य
रूसी डिजाइनर को कोट्स
Cheryl Co गर्भवती छ?
माटो संग म्याकरोनी - हर दिन को लागि स्वादिष्ट व्यंजनहरुको लागि उत्तम व्यञ्जनहरु
प्याज - राम्रो र खराब
गर्भावस्थाको बेला डोजोपन